Daniel Sturridge oo ku dhow inuu ku biiro kooxda Liverpool. - Caasimada Online
Home Warar Daniel Sturridge oo ku dhow inuu ku biiro kooxda Liverpool.
Daniel Sturridge oo ku dhow inuu ku biiro kooxda Liverpool.
Liverpool ayaa la aaminsan yahay inay xalisay qarashaadkii cadaanka ah ee Daniel Sturridge xilli ay ku dhowdahay inay usoo dhaqaajiso Anfield waxaana la rajeynayaa in heshiiska shaaca laga qaado 48da saacadood ee soo aadan.
Wargeyska Afka dheer ee Sportsmail ayaa ogaaday inay wadahadalada la iska meel dhigay uuna 23-jirkaani ka dhaqaaqi doono Stamford Bridge xilli uu qeyb ka noqonayo weerarka la xoojinayo ee kooxda Liverpool.
Sportsmail ayaa markii ugu horeysay ogaatay inay Liverpool dooneyso Sturridge dhamaadkii bishii August.
Xidigaan ayaa caafimaadka u mari doona Reds waxaana la fahamsan yahay inay kula saxiixaneyso 12 milyan oo ginni.